G9 WGB-A Resistance foornada oo cawo iyo Siraaj Holder T300 CE Heerkulka High - Shiinaha Haimen Xinrong Electric
G9 WGB-A foornada oo cawo iyo Siraaj Holder T300 CE Resistance Heerkulka Sare
Haimen co korontada xinrong., Ltd waa qof ku taqasustay soo saara noocyada kala duwan ee haysta laambad lagu ridayo, kaasoo loo isticmaalo foornada gaaska, korontada foornada, foornada uumi saafi ah, foornada uumi iyo wixii la mid ah. Sawirka wuxuu muujinayaa wax soo saarka ugu dambeeyay: haysta laambad foornada G9 of taxane WGB ah. Waxay leeyihiin sifooyinka iska caabin heerkulka sare. Our warshad uu joogsadey ISO ah: 9001: 2000 nidaamka tayada shahaado, sheyga ayaa CE, ROHS iyo shahaado kale, waxaan si daacad ah sugaynaa in gudaha iyo dibadda merc ...
Haimen co korontada xinrong., Ltd waa qof ku taqasustay soo saara noocyada kala duwan ee haysta laambad lagu ridayo, kaasoo loo isticmaalo foornada gaaska, korontada foornada, foornada uumi saafi ah, foornada uumi iyo wixii la mid ah. Sawirka wuxuu muujinayaa wax soo saarka ugu dambeeyay: haysta laambad foornada G9 of taxane WGB ah. Waxay leeyihiin sifooyinka iska caabin heerkulka sare. Our warshad uu joogsadey ISO ah: 9001: 2000 nidaamka tayada shahaado, sheyga ayaa CE, ROHS iyo shahaado kale, waxaan si daacad ah sugaynaa in baayacmushtariyaasha gudaha iyo dibadda inay ku weyddiiso, fulin OEM iyo ODM amarada. Isla mar ahaantaana, waxaan heysanaa 20 sano oo waayo aragnimo ah warshadaha lagu ridayo, si aan faham qoto dheer ee wax soo saarka warshadaha, hufnaan horumarinta wax soo saarka.
Previous: G9 WGB foornada Siraaj Holder T300 CE oo cawo iyo Holder
Next: G9 XG-A Holder foornada halogeen Incandescent nalalka
E14 E27 G9 Ceramic galaas Siraaj Holder
E14 G9 foornada Siraaj Holder
Holder E14 G9 foornada Siraaj Waayo, Sale
G9 Holder Siraaj Ceramic
Holder G9 foornada Siraaj Waayo, Sale
Holder G9 foornada Light
G9 foornada Holder Waayo Sale Light
G9 oo cawo iyo laambad Holder
Holder G9 oo cawo iyo laambad Waayo Sale
Daad Holder G9 foornada Siraaj
Daad Holder G9 oo cawo iyo siraad
G9 WGA-38 foornada Light Holder oo cawo iyo Siraaj Holder ...
G9 XG-A Holder foornada halogeen Incandescent nalalka
G9 WGA-40 oo cawo iyo Lampholder CE dhoobada Holder ...
G9 WGA-705V foornada / cawo Siraaj CE Holder High Te ...
G9 WGA-708V 2A250V T300 foornada Siraaj Holder
G9 WGA-43 foornada Siraaj Holder 2A250V ROHS CE Ceram ...